रोमी २ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२ त्यसैले ए मानिस, तिमी जोसुकै हौ, यदि अरूलाई दोष लगाउँछौ भने तिमी आफै दोषी छौ। अरूलाई दोष लगाएर तिमी आफैलाई दोषी ठहराउँछौ, किनकि तिमी अरूलाई जुन कुराको दोष लगाउँछौ, त्यो आफै पनि गरिरहन्छौ। २ अब हामीलाई थाह छ, यस्ता काम गरिरहनेहरूको परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ र उहाँको न्याय सही छ। ३ ए मानिस, यदि तिमी त्यस्ता काम गरिरहनेहरूलाई दोषी ठहराउँछौ तर आफूचाहिं ती गर्छौ भने के तिमी आफू परमेश्वरको न्यायबाट उम्कन सक्छु भन्ठान्छौ? ४ अथवा परमेश्वरको दयाले तिमीलाई पश्‍चात्तापतिर लैजाने कोसिस गर्दैछ भन्ने थाह नभएकोले के तिमी परमेश्वरको अपार दया, सहनशीलता अनि धीरजलाई तुच्छ सम्झन्छौ? ५ तर तिमीहरूको मन कठोर अनि अपश्‍चात्तापी भएकोले तिमीहरूले आफ्नो निम्ति परमेश्वरको क्रोध साँच्दैछौ, जुन उहाँको क्रोध र सही न्याय प्रकट हुने दिनमा तिमीहरूमाथि पोखाइनेछ। ६ उहाँले हरेकलाई आफ्नो कामअनुसारको प्रतिफल दिनुहुनेछ: ७ निरन्तर असल काम गरेर गौरव, आदर अनि अविनाशी शरीर खोज्नेहरूलाई उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। ८ तर जो कल्याहा छन्‌ अनि जो सत्यबमोजिम चल्नुको साटो परमेश्वरको स्तरविपरीत चल्छन्‌, तिनीहरूमाथि क्रोध, रिस, ९ सङ्कष्ट अनि आपत्‌ आइपर्नेछ, हानिकारक काम गर्ने हरेक मानिसमाथि, पहिले यहूदीमाथि अनि त्यसपछि ग्रीकमाथि।* १० तर असल काम गर्ने हरेकलाई परमेश्वरले गौरव, आदर अनि शान्ति दिनुहुनेछ, पहिले यहूदीलाई अनि त्यसपछि ग्रीकलाई। ११ किनकि परमेश्वर कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न। १२ उदाहरणका लागि, परमेश्वरको व्यवस्था नजानेर पाप गर्नेहरू व्यवस्था नजानेकै अवस्थामा मर्नेछन्‌, तर व्यवस्था जानेर पाप गर्नेहरू सबैको चाहिं व्यवस्थाबमोजिमै न्याय हुनेछ। १३ किनकि व्यवस्था सुन्नेहरू होइन तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू परमेश्वरसामु असल ठहरिनेछन्‌। १४ यदि व्यवस्था नहुने गैर-यहूदीहरू स्वभावैले व्यवस्थामा भएका कुराहरू गर्छन्‌ भने व्यवस्था नभए तापनि तिनीहरू आफै आफ्नो निम्ति व्यवस्था हुन्‌। १५ तिनीहरूको मनमा व्यवस्थाका कुरा लेखिएका छन्‌ भनेर तिनीहरू आफैले प्रदर्शन गर्छन्‌ र तिनीहरूको अन्तस्करणले पनि त्यसको साक्षी दिन्छ। अनि तिनीहरूको सोचविचारले नै तिनीहरूलाई दोषी वा निर्दोष ठहराउँछ। १६ मैले प्रचार गरेको सुसमाचारबमोजिम परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमार्फत मानिसहरूका गोप्य कुराहरूको न्याय गर्नुहुँदा यो प्रकट हुनेछ। १७ तिमी आफूलाई यहूदी हुँ भनी भन्छौ, व्यवस्थामाथि भर पर्छौ अनि परमेश्वरसित तिम्रो सम्बन्ध छ भनी गर्व गर्छौ, १८ परमेश्वरको इच्छा के हो, त्यो तिमीलाई थाह छ र मौखिक रूपमा मोशाको व्यवस्थाको शिक्षा पाएकोले सर्वोत्तम कुराहरू के हुन्‌, त्यो पक्का गर्न सक्छौ १९ अनि तिमीलाई विश्वस्त तुल्याइएको छ कि तिमी अन्धालाई बाटो देखाउने, अध्याँरोमा बसिरहेकाहरूलाई ज्योति दिने, २० बेसमझहरूलाई सच्याउने, सीधासादाहरूलाई सिकाउने हौ अनि मोशाको व्यवस्थामा पाइने ज्ञान र सत्यको ढाँचा पनि तिमीलाई थाह छ— २१ अब तिमी जो अरूलाई सिकाउँछौ, के आफैलाई चाहिं सिकाउँदैनौ? तिमी जो “नचोर्नू” भनी प्रचार गर्छौ, के आफैचाहिं चोर्छौ? २२ तिमी जो “आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अरूसित यौनसम्बन्ध नराख्नू” भनी भन्छौ, के आफैचाहिं त्यस्तो सम्बन्ध राख्छौ? तिमी जो मूर्ति देखेर घिन मान्छौ, के आफैचाहिं मन्दिरहरू लुट्छौ? २३ तिमी जो व्यवस्थामाथि गर्व गर्छौ, मोशाको व्यवस्थाविरुद्ध पाप गरेर के आफैचाहिं परमेश्वरको अनादर गर्छौ? २४ किनकि जस्तो लेखिएको छ, “तिमीहरूले गर्दा अन्यजातिहरूको बीचमा परमेश्वरको नाम निन्दित भइरहेको छ।” २५ तिमी व्यवस्थाबमोजिम चल्छौ भने मात्र वास्तवमा खतना* फाइदाजनक हुन्छ तर तिमी व्यवस्थाविरुद्ध पाप गर्छौ भने तिम्रो खतना, खतना नगरेसरह हुन्छ। २६ त्यसैले यदि खतना नभएको मानिसले मोशाको व्यवस्थामा परमेश्वरले तोक्नुभएको माग पूरा गर्छ भने खतना नगरे तापनि के ऊ खतना भएसरह हुँदैन र? २७ खतना नभए तापनि स्वभावैले मोशाको व्यवस्था पालन गरेर उसले तिमीलाई दोषी ठहराउनेछ, किनकि तिमी लिखित नियम पाएको अनि खतना भएको मानिस भएर पनि व्यवस्थाविरुद्ध पाप गर्छौ। २८ जो बाहिरबाट यहूदी देखिन्छ, ऊ यहूदी होइन न त शरीरमा गरिने खतना नै खतना हो। २९ तर जो भित्रबाट यहूदी हो, ऊ नै यहूदी हो अनि जसको लिखित नियमबमोजिम होइन तर पवित्र शक्तिद्वारा मनको खतना भएको छ। यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन परमेश्वरबाट हुन्छ।
^ रोमी २:९ * यो पद र यसपछिको पदमा ग्रीकले गैर-यहूदीहरूलाई बुझाउँछ।
^ रोमी २:२५ * लूका १:५९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।